Ny androaniko | Aprily 2021
[Tantara fampahalalana. ] 04 Aprily, 2021 18:44
Ny fanambadiana jiosy.
Ho an'ny jiosy dia tsy Sakramenta fa Fifanarahana ny fanambadiana. Taloha dia natao tany an-trano ihany izy fa ankehitriny kosa afaka ankalazaina any amin'ny sinagoga. Ny zava-dehibe fotsiny dia ao ambany tataro antsoina hoe "khuppa" izy ireo no mandray ny tsodrano ho mariky ny fonenan'ny tokantranon'izy ireo.
Razazalahy no manolotra peratra ho an-drazazavavy izay tsy maintsy entiny foana eo amin'ny fanondron'ny tànany ankavanana ary mandritra izany ny rahalahiny dia mitazona labozia amin'ny mosoara dantelina natolotr'i razazavavy.
"Kettuba" izay midika hoe Soratra no anaran'ilay Fifanarahana. Azo haingoina amin'ny sarim-boninkazo kely izy, soniavin'ny vavolombelona ary miantoka ny zon-drazazavavy raha sanatria tonga amin'ny tsontsori-mamba isarahana. Noho izay antony izay dia ny renin-dravehivavy no mitahiry ny "kettuba".
Taloha dia natao lisitra tao daholo ny fananana nentin-drazazavavy ary teto Roma dia tsy maintsy nametraka tahirimbola antoka, mitentina avo roa heny amin'ny sandan'ny fananana nentin-dravehivavy razazalahy.
Amin'ny maha fifanarahana ny fanambadiana dia azo ekena ny fisarahana amin'ny jiosy, nantsoina hoe "ghet" izay ankatoavin'ny Fitsarana ary marihina amin'ny fandrovitana ny "kettuba". Azo atao tsara koa ny manambady fanindroany any amin'ny sinagoga.
Sary fanehoana : Kettuba, sanganasan'i Di Castro - Di Segni.
Hosodoko sy ranomainty amin'ny pergamena vita amin'ny hoditr'ondry.